ရှယ်ဂေါ်တဲ့အရသာနဲ့ လျှာကိုဂျွမ်းပြန်လန်သွားစေမယ့် Spicy Food ကောင်းကောင်းလေးစားချင်ရင်တော့.. – FoodiesNavi
By yin sandi On July 11, 2018 0
ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ဟူးဟူးဟဲဟဲဖြစ်သွားစေမယ့် Spicy Food ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုမှ ရင်ခုန်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်မင်အခုပြောပြမယ့်ဆိုင်လေးကိုတန်းဒိုးဖို့ Review မဖတ်ရသေးခင် Ready သာပြင်ထားလိုက်နော်။ ဆိုးဆိုးဟော့တဲ့အရသာဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး စီးဆင်းနေသလားထင်မှတ်မှားလောက်အောင် Spicy စစ်စစ်တွေကိုအားပါးတရ ဝါးတီးဖွင့်နိုင်မယ့်ဆိုင်လေးကတော့ ရှမ်းကုန်းလမ်းက ” Pragon Spicy Food ” ပါ။ ဇူလိုင်လ(၈)ရက်နေ့ကမှစဖွင့်ထားတာဆိုပေမယ့် Menu စုံစုံလင်လင်နဲ့ အပြင်အဆင်တွေကလုံးဝ Perfect ဆိုတော့ထိုင်ရတာ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
Spicy Food ဆိုတဲ့အတိုင်း မာလာရှမ်းကောကတော့ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ မာလာရှမ်းကောအဓိကဆိုင်လေးမဟုတ်တော့ ဂဏန်း ၊ ငါးဖက်ထုပ် ၊ အသားလုံးတွေတော့မရှိဘူးရယ်။ ရှယ်လတ်ဆတ်တဲ့ ပြည်ကြီးငါးကြီးတွေ ၊ ကင်းမွန် ၊ သွေးဂုံး ၊ ပုဇွန် ၊ ကြက်ဥချောင်း ၊ ကိုရီးယားအကင်လေးတွေ ၊ မှို ၊ အရွက်အစုံရှိတယ်။ သဘောအကျဆုံးကတော့ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတာက အတော်ကြီးစေတနာပါတယ်။ ဘာမှမပြောဘဲ ဒီတိုင်းပဲမှာတာတောင် ကိုယ်တွေလာတာ(၃)ယောက်မို့ (၂)ပန်းကန်ခွဲချပေးတယ်။ အရသာကလည်းစွတ်ဖတ်ဖတ်လေးနဲ့ ပုံမှန်အစပ်နဲ့အထုံပဲမှာတာကို အစပ်အဟပ်တည့်တည့်လေးနဲ့ တော်တော်ဖိုင်းတယ်။ အရသာဓာတ်တွေကလည်း အရွက် ၊ ခေါက်ဆွဲ အသားတွေကြားထဲစိမ့်ဝင်နေပြီး လျှာပေါ်တဝဲဝဲလည်နဲ့ စွန်းကောင်းချက်ပဲ။ ဒီဆိုင်လေးကိုမာလာရှမ်းကော သွားစားဖြစ်ရင်တော့ ပြည်ကြီးငါးကို သေချာပေါက် Try သင့်တယ်။ ရှယ်လတ်ဆတ်ပြီးအသားတွေက ကျစ်လျစ်ပြီးအိဖတ်နေတာပဲရယ်။
Spicy Food ဆိုင်တွေသွားစားတိုင်း အမြဲစားဖြစ်တာကတော့ ပြောင်းဖူးထောင်းပဲ။ Paragon ပြောင်းဖူးထောင်းရဲ့ထူးခြားချက်က ပုဇွန်ခြောက်အကြီး(၂)ကောင်(၃)ကောင်ကိုဖြူးမနေဘဲ ပုဇွန်ခြောက်မွစိလေးတွေကို ခပ်များများလေးဖြူးပေးထားတော့ ပြောင်းဖူးထောင်းထဲမှာပုဇွန်ခြောက်အရသာလေးတွေညှပ်ပြီး အရသာကပိုစူးရှသွားတာပဲ။ ပြောင်းဖူးထောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကလည်း ပုံမှန်စားနေကျခရမ်းချဉ်သီးတွေမဟုတ်ဘဲ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေ ထည့်ထောင်းထားတော့ အချဉ်ဓာတ်စူးစူးလေးနဲ့ အရသာကတေပိုလို့ဂေါ်နေရော ? ပြောင်းဖူးရဲ့အချိုဓာတ်တွေကို ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာလေးထောင်းပေးထားတော့ အရသာကပြောမပြတတ်အောင်ပဲ။ ပြောင်ဖူးထောင်းကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေကလည်း တရွှတ်ရွှတ်နဲ့သောက်လို့ကောင်းချက်က မင်မင်ဆို တစ်ပန်းကန်လုံးပြောင်ရော ? ။
တုံယမ်းထမင်းကြော်ကတော့ ? Wooo ? လို့မြည်တမ်းသွားရလောက်အောင် ထမင်းကြော်အရသာတွေထဲမှာ တုံယမ်းအရသာတွေစီးဝင်နေအောင် ကြော်ထားတဲ့အရသာလေးက တော်တော်မှည့်တယ်ကိုယ့်လူရေ ? သံပုရာခြမ်းလေးညှစ်ထည့်ပြီး အနံ့သင်းသင်းလေးထပ်ရောလိုက်တော့ လုံးဝ Perfect ပဲ။ ပင်လယ်စာတွေလည်းအပုံကြီးထည့်ပေးထားတယ်။ ထမင်းကြော်ပေါ်တင်ပေးထားတဲ့ သခွားသီးဝိုင်းလေးတွေကို ထမင်းကြော်နဲ့ရောပြီး တဂျွမ်းဂျွမ်းကိုက်ဝါးလိုက်တော့ ဆွေမျိုးတောင်မေ့သွားတယ် ? ဘော်ဒါတွေသွားစားဖြစ်ရင်လည်း ဒါလေးတော့မဖြစ်မနေစားကြည့်ခဲ့ကြပါဦး ?
ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်ကတော့ ? ပုဇွန်ပျောက်နေအောင်ရောသုပ်မပေးထားဘဲ အသားတွေပြည့်နေတဲ့ပုဇွန်ထုပ်တွေကို အရံသင့်စားလို့ရအောင် ဖြန့်ပေးထားပြီး ကြက်သွန်ဖြူငရုပ်သီးစိမ်းလေးတင်ပြီး အညှီစုပ်ပေးထားတော့ ပုဇွန်ရဲ့ချိုမြလတ်ဆတ်မှုတွေကို ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းကြီးခံစားရတယ်။ Sauce လေးကလည်းစွန်းဖိုင်း ? ပုဇွန်နဲ့အတွဲအဆက်လိုက်ဖက်ညီချက်ပဲ
Juice တွေကတော့ တအားကြီးမထူးခြားဘူးရယ်။ အပြင်အဆင်လေးကတော့ မိုက်တယ်။ အအီပြေသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပင်မှည့်လေးမဆိုးဘူးရယ်။ ပူစီနံရွက်လေးပါထည့်ထားတော့ အနံ့လေးကပိုမွှေးနေရောပဲ။
မင်မင်အကြွေဆုံးကတော့ Customer Service ပါပဲ ? ဘယ်ဆိုင်မှာမှမတွေ့ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကို ဒီဆိုင်လေးမှာတွေ့ရတယ်။ တစ်ခုခုလိုမှအသည်းအသန် လှမ်းခေါ်နေစရာမလိုဘဲ တစ်ခုခုလိုတဲ့အချိန်ဆို အမဘာလိုလဲဆိုပြီး Stand By Service ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံစကေးတော့မဟုတ်ဘူးလေ ? တစ်ခုစိုးရိမ်တာက ဖွင့်စပဲ Service ကောင်းပြီးလူများလာရင်ရော ဒီလိုကောင်းနိုင်ပါဦးမလားပေါ့။ ဆက်ကောင်းနေဆဲဆိုရင်တော့ တော်တော်ပေါက်မြောက်ဦးမယ့်ဆိုင်လေးပါပဲ ?
ဆိုင်စဖွင့်ခါစမို့လားတော့မသိ Rest Room ပြင်နေတုန်းဆိုလို့ ဒါလေးတစ်ခုတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူး ။ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာ Rest Room လေးကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတော့ ဒီတစ်ခုတော့သိပ်သဘောမကျဘူးရယ် ။
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးကဖိုင်းပြီး အဲကွန်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဆိုတော့ ဇိမ်ကျကျဆွဲရုံပဲ ? အခုလတ်တလော စားသောက်ဆိုင်အသစ်ဖွင့်တဲ့အထဲတော့ ဒီဆိုင်လေးကို Try ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ပုံမှန်(၁၅၀၀)လောက်ကစတာမို့ သက်သက်သာသာလေးနဲ့အရသာကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၆၂) ၊ ရှမ်းကုန်းလမ်းပေါ် ၊ သုခလမ်းထိပ် ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။